Maxaa looga hadlay kulankii dhex-maray Guddiga Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Guddoonka Baarlamaanka ee Hirshabeelle – Kalfadhi
Maxaa looga hadlay kulankii dhex-maray Guddiga Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Guddoonka Baarlamaanka ee Hirshabeelle
Guddiga KMG ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee Golaha Shacabka ayaa xarrunta Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kula kulmay Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed
Sidoo kale Guddiga ayaa la kulmay guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Canab iyo Guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Hirshabeelle.
Kullanka u-jeedkiisa ayaa ahaa sidii ay guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Hirshabeelle ay guddiga ay ugu soo bandhigi lahaayeen aragtiyadooda iyo tallooyinkooda ku aadan Sharciga doorashooyinka qaranka.
Guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa guddiga KMG ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka usoo bandhigay aragtiyadooda iyo tallooyinkooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka.
Xildhibaan mMxamed Cumar Ceeymooy, oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga ahna ku-simaha guddmiyaha guddiga, ayaa kaga mahadceliyay guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Hirshababeelle talooyinkooda iyo aragtiyadooda wanaagsan ee ku aadan sharciga doorashooyinka Qaranka.
Nuxurka khudbadii Madaxweyne Farmaajo ee furitaanka Kalfadhiga 6-aad?
Muxuu Madaxweyne Farmaajo kaga hadlay khudbadii uu ka jeediyay munaasabadii casho-sharafta ee loo sameeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka?